by UJeffrey Somers
Isigqeba liyunithi ebalulekileyo yesakhiwo kunye nentlangano ngaphakathi komsebenzi weengqungquthela ; Igama livela kwi- stanza yaseNtaliyane, elithetha "igumbi." I-stanza yiqela lemigca, ngamanye amaxesha lihlelwe kwipatheni ethile, ngokuqhelekileyo (kodwa kungekho njalo) isuka kuyo yonke indawo ngaphandle kwendawo engenanto. Kukho iintlobo ezininzi zamanqwanqwa, ukusuka kumanqwanqwa angenawo umzekelo okanye imithetho eqondakalayo kwiimimandla ezilandela iipateni ezinqongqo ngokwemigangatho yesilayidi, icebo lesingqisho , kunye nezakhiwo zomgca.
Isiqendu sifana nesigcawu ngaphakathi komsebenzi weprose kwixesha eliqhelekileyo liqulethwe, libonisa ingcamango ehambelanayo okanye inyathelo elinye ekuqhubekeni kweengcinga ezidibeneyo ukubonisa umxholo kunye nesifundo sombongo. Ngandlela-thile, i-stanza yinkondlo ngaphakathi kwimbongo, isiqhelo saso sonke esilungisa isakhiwo esipheleleyo somsebenzi onjalo ukuba isitembu ngasinye siyinkondlo ngokwayo.
Qaphela inkondlo engazange iphule kwiinqanaba, eziqulathe imigca yesigqi kunye nobude obufanayo, iyaziwa njengevesi le-stichic . Ininzi inqaku elingenanto lingabonakali kwindalo.
IiFom kunye neMimiselo yeStanz
I-Couplet: I-couplet yimizila emibini eyenza isigxina esisodwa esisigxina, nangona kunjalo kaninzi akukho ndawo ebeka izibini ezithandanayo phakathi komnye:
"Ukufunda okuncinane kuyingozi;
Phuza ngokunyanisekileyo, okanye ungayinambali intwasahlobo yasePerrian "(i-Essay on Criticism, uAlexander Pope)
I-Tercet: Efana ne-couplet, i-tercet yintlupheko eyenziwe ngemigca emithathu yemirhumo (isiqwenga somyinge siyahlukahluka; ezinye iitrokethi ziya kugqitywa kwisigxina esifanayo, ezinye ziza kulandela icebo lesingeniso se-ABA, kwaye kukho imizekelo ye-rhyme izicwangciso ezifana nesicwangciso se- riza somhlaba apho umgca ophakathi kwemirhubhe nganye ye-tercet kunye nomgca wokuqala kunye wokugqibela wesigxina esilandelayo):
Ndivusa ukuba ndilale, ndize ndivuke.
Ndivakalelwa kwintlekele kwinto endiyikoyikayo.
Ndifunda ngokuya apho ndiya khona. "(The Waking, Theodore Roethke)
I-Quatrain: Mhlawumbi abantu abaninzi bacinga ntoni xa beva ilizwi le- stanza , i-quatrain yimiqolo emine, ngokuqhelekileyo isetyenziswe ngendawo engenanto. Iimpawu zihlala ziqulethe imifanekiso kunye neengcinga ezichaphazela yonke.
Isibongo ngasinye uEmily Dickinson sabhala sakhiwe kwiinqatyana:
"Ngenxa yokuba andinakuyeka ukufa -
Wammisa ngomusa ngenxa yam -
Inqwelo eqhutywe kodwa iLizwi Lethu -
Nokungafi. "(Ngenxa yokuba andinakuyeka ukufa, uEmily Dickinson)
I-Rhyme Royal: I-Rhyme Royal iyinqanaba eliqulunqwe ngamanqaku asixhenxe kunye nenkqubo yesicengechunge esiyinkimbinkimbi. I-Rhyme Royals inomdla njengoko iyakhiwa kwezinye iifom ze-stanza-umzekelo, iRhyme Royal ingaba yi-tercet (imizila emithathu) idibene ne-quatrain (emine imigca) okanye i-tercet edibaniswe neembini ezimbini:
"Kwabakho ukubetha emoyeni ubusuku bonke;
Imvula yafika kakhulu kwaye yawela emkhukula;
Kodwa ngoku ilanga linyuka lizolile kwaye liqaqambile;
Iintaka zicula kwiimithi ezikude;
Ngaphezulu kwezwi lakhe elimnandi i-Stock-dove broods;
U-Jay uphendula njengabavakalisi beMagpie;
Yaye yonke umoya izaliswa ngomsindo omnandi wamanzi. "(Isigqibo kunye nokuzimela, uWilliam Wordsworth)
U-Ottava umdaka: Isiqendu esakhiwe ngeendlela ezisibhozo kunye nezilwanyana ezilishumi elinesibhozo okanye ezilishumi elinanye usebenzisa isiqulatho esithile senkqubo (abababcc); maxa wambi basebenzisa ngaphezulu njengeRhyme Royal kunye nomgca ongeyinqaba okanye ohlukumezayo wesibhozo njengoDon Juan waseBronron :
"Yaye! ukuba i-eer ndimele ndiyibale, ndifunga-
Kodwa oko akunakwenzeka, kwaye akunako -
Ngokukhawuleza le ntlanzi eluhlaza iyancibilika emoyeni,
Ihlabathi liza kuzimisela ngokukhawuleza elwandle,
Kunokuba ndilahle umfanekiso wakho, Hayi, yam entle!
Cinga nantoni na, ngaphandle kwakho;
Ingqondo ayifumaneki isisombululo se-physic "-
(Lapha iinqanawa zanikezela, kwaye wakhula ulwandle.) "(UDon Juan, Nkosi Byron)
Isiqendu se-Spenserian: Ukuphuhliswa ngu-Edmund Spenser ngokukhethekileyo emsebenzini wakhe we -Fairy Queene , le nqanaba lenziwe ngemigqa eyisibhozo ye-intambameter ye-iambic (ezilishumi iibllabha kwiintlanu ezimbini) zilandelwa ngumgca wesithoba kunye nezilwanyana ezilishumi elinesibini:
"Umlenze onobubele wawunqabileyo,
Ycladd kwizixhobo ezinamandla kunye nesilivere yesilivere,
Kwakukho amanxeba amadala enxeba ze-deepe,
Iimpawu ze-cruell ezininzi zamagalelo egazi;
Nangona kunjalo, kwada kwanga xesha akazange asebenzise:
Umsindo wakhe othukutheleyo wenza ukuba i-bitt ikhuni,
Ukutshatyalaliswa kwintsimbi kwinqanaba lokutya:
Wayebonakala ebonakalayo, kwaye wenza okulungileyo,
Njengomnye wee-knightly jousts kunye nobudlova obudibeneyo. "(I-Faerie Queene, uEdmund Spenser)
Qaphela ukuba ezininzi iintlobo zeenkondlo, ezifana ne- sonnet okanye i-villanelle, ziqulunqwe ngokukodwa kwisigqibo esisodwa kunye nemithetho ethile yesakhiwo kunye nesingqisho; umzekelo, i-sonnet yendabuko imida elishumi elinesine ye-intambameter ye-iambic.
Iziqithi zikhonza imisebenzi emininzi kwimbongo:
Umbutho: Iziqendu zingasetyenziselwa ukudlulisela iingcamango okanye imifanekiso ethile.
I-Rhyme: Iziqendu zivumela izicwangciso zangaphakathi neziphindaphindiweyo.
Inkcazo ebonakalayo: Ngokukodwa kwizibongo zanamhlanje, i-stanza ingasetyenziswa ukulawula indlela imbongo ebonakala ngayo kwiphepha okanye kwisikrini.
Utshintsho: Iinqanaba zingasetyenziselwa ukutshintshela ithoni okanye umfanekiso.
Ummandla oMhlophe: Isikhundla esimhlophe kwisibongo sisoloko sisetyenziselwa ukudlulisa ukuthula okanye ukuphela. Iziqithi zivumela ukusetyenziswa kobugcisa bendawo.
Yonke inkondlo, ngandlela-thile, iqulunqwe imibongo emincinci eyimigangatho yayo-leyo leyo ingathethwa ukuba yenziwe imibongo encinci yimizila kwisigaba ngasinye. Ngamanye amagama, kwiingqungquthela, zibongoze yonke indlela.
Indlela yokuchonga nokuqonda iMhythine Rhyme kwiingqungquthela
Imiba yeMfazwe ePhambili
Iingqungquthela zeClassic About the Sailors and Sea
'I-Comin' Thro ye-Rye '
Ukusebenzisa isilungiselelo 'Sobre'
I-Viking Raids - Kutheni i-Norse ye-Scandinavia ye-Norse eya ku-World?
I-Hulk Hogan WWE kunye nexesha le-WCW
Inkcazo yeNdlela yokuziphatha
Isingeniso kuGanesha, uThixo wamaHindu woPhumelelo
Indlela Yokusinda Ngomlilo Omkhulu
Iingoma eziphezulu ezi-10 zeePop zohlobo lwasehlobo 2006